Fonosana harona vita amin'ny paoma vita sinoa any China fonosana harona kosmetika voajanahary voajanahary ho an'ny Unisex ho an'ny fivezivezena sy mpamatsy | Changlin
Kitapo vita amin'ny lamba mananasy vita amin'ny fonosana voajanahary voajanahary ho an'ny kitapo ho an'ny Unisex ho an'ny dia
Topimaso amin'ny famokarana: JF20-22
Material: rongony mananasy Weight: 76g
Size: L16 * W5 * H14cm fanakatonana: zipper
Ny lamba mananasy, fibre ravina mananasy, fantatra amin'ny anarana hoe fibre mananasy, dia ny fibra nalaina avy amin'ny ravina mananasy, an'ny fibra misy lalan-drà, izay azo alaina amin'ny fomba simika, biolojika ary mekanika. Ny fibre nalaina tamin'ny fomba mekanika dia manana kalitao tsara sy voajanahary ary tsy misy fandotoana. Voaporofo fa ny hemp mananasy dia misy bakteria voajanahary sy bakteriaostika voajanahary, izay afaka mamono bakteria ary manakana ny fitomboan'ny holatra sy zavamiaina bitika. Izy io dia karazana fitaovana lamba fikarakarana ara-pahasalamana voajanahary tsara dia tsara miaraka amina firafitra manify tena tsara ao anaty ny firafitry ny fibre ary mahay mandray tsara sy manala etona rano haingana.
Ny fibre pineapple dia fitaovana voajanahary voajanahary sy maharitra ary tsy misy habibiana, vita tamin'ny ravina fako ao amin'ilay zavamaniry mananasy. Ireo ravina ireo dia vokatra azo avy amin'ny fijinjana mananasy, ka tsy mila loharanon-karena fanampiny ho an'ny tontolo iainana ny akora.
Ny fibre ravina mananasy, izay an'ny kofehin'ny ravina hemp, dia alaina avy amin'ny ravina mananasy. Azo afangaro amin'ny kofehy voajanahary na kofehy sentetika. Fanontana sy fandokoana mora, mifoka rivotra, tsy mora ketrona, mahazo aina, milamina ara-tontolo iainana.
Previous: Kitapo vita amin'ny rongony vita amin'ny rongony vita amin'ny rongony, paosy kosmetika, kitapo kitapo kitapo manokana ho an'ny lasitra marika
Manaraka: Fonosana makiazy kosmetika azo ampiasaina azo ampiasaina indray ho an'ny Unisex ho an'ny dia